सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद र ओम्नी प्रकरणमा मुछिएका नै लेखा समितिमा सिफारिस !! | सुदुरपश्चिम खबर
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद र ओम्नी प्रकरणमा मुछिएका नै लेखा समितिमा सिफारिस !!
काठमाडौं – एमालेले रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएका संघीय संसद्का विषयगत समिति सदस्यमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट सांसदको नाम सिफारिस गरेको छ । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा विवादमा तानिएका गोकुल बाँस्कोटालाई त्यही विषयमा छानबिन गरेको सार्वजनिक लेखा समितिमा सिफारिस गरिएको छ ।
यसअघि कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा रहेका गौतमलाई पनि यही समितिमा ल्याउन लागिएको हो । स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न ओम्नीलाई ठेक्का दिइएको विषयमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेल विवादमा तानिएका थिए । यो प्रकरणमा पनि लेखा समितिले अनियमितता औंल्याएर थप छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
लेखा समितिमा अहिले एमालेका ११, कांग्रेसका ७, माओवादी केन्द्रका ४ र जनता समाजवादी पार्टीका ४ सांसद सदस्य छन् । (upaharkhabar बाट सभार)
मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने २१० जनाको सूची जसपाले बुझायो !!
भारतबाट फर्किनेमा कोरोना !!